आफ्नो ब्राभित्र पैँतीस दिनसम्म राखेर एक युवतीले कोरलिन हाँसको अण्डा ! – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Intresting/आफ्नो ब्राभित्र पैँतीस दिनसम्म राखेर एक युवतीले कोरलिन हाँसको अण्डा !
मान्छेले आफ्नै शरीरको ताप दिएर चराचुरुंगीको अण्डा कोरलेको सुन्नुभएको छ? सायदै छैन होला तर यहाँ एउटा अनौठो र रमाइलो कुरा भएको छ। अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा एकजना महिलाले आफ्नो ब्राभित्र हाँसको अण्डा राखेर कोरलिदिएकी छिन्। बेट्सी रोस नामकी ती महिलाले पार्कमा अलपत्र अवस्थामा फेला पारेको हाँसको अण्डालाई आफ्नो ब्राभित्र पैँतीस दिनसम्म राखेर कोरलिदिएकी छिन्। उक्त अण्डाबाट हाँसको बचेरो निस्किएको छ।
३५औँ दिनमा हेर्दा उक्त अण्डाबाट हाँसको चल्लाको आफ्नो ठुँड बाहिर निकाल्न थालेको जस्तो देखियो। त्यसपछि उनले उक्त अण्डालाई छातिबाट निकालेर एउटा खुल्ला बाकसमा राखिन् ता कि अण्डाको खोल फुटाएर चल्ला सजिलैसँग बाहिर निस्कियोस्। तर बाकसमा राखेपछि पनि हाँसको चल्लाको ठुँडले अण्डाको खोल फुटाएर बाहिर आउन नसकेपछि उनले पशु चिकित्सकलाई खबर गरिन्। पशु चिकित्सकको परामर्श बमोजिम उनले अण्डाको बाहिर खोललाई बिस्तारै फुटाइन्। त्यसपछि हाँसको चल्ला बाहिर निस्किन सक्यो।
तथापि मानिसले कोरलेको उक्त चल्लाको अवस्था निकै नाजुक थियो। केही दिनको मेहेनतपछि मात्र उक्त चल्ला राम्रोसँग हिँड्न सक्यो। केही समय पालेपछि रोसले उक्त हाँसको चल्लालाई स्थानीय एक वन्यजन्तु उद्दार फारमलाई दिइन्। सो हाँसको चल्ला अहिले ठूलो भैसकेको छ र वन्यजन्तु उद्दार फार्ममा रमाइरहेको छ।
युवतीलाई अँ’गालो हा’लेर सुता’उनेलाई एक घण्टाको ८ हजार तलब….. तुरुन्तै हेर्नुहोस